မြင်းခြံခရိုင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲရန်ဖိတ်ခေါ်…. – Sport Gaber
မြင်းခြံခရိုင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲရန်ဖိတ်ခေါ်….
မြင်းခြံခရိုင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲဖို့ ဒီကနေ့ မေလ ၁၁ရက်က မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကို မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ တွေ စတင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
မြင်းခြံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ တလုပ်ကျေးရွာမှာ စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မူတွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပြီး မြင်းခြံမြို့မှာလဲ ဒီနေ့ညနေပိုင်းကစပြီး ပေါက်ကွဲမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ကရက်ဒစ်
မွငျးခွံခရိုငျ ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့မှ မွို့သိမျးတိုကျပှဲ ဆငျနှှဲရနျဖိတျခေါျ….
မွငျးခွံခရိုငျ ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့မှ မွို့သိမျးတိုကျပှဲ ဆငျနှှဲဖို့ ဒီကနေ့ မလေ ၁၁ရကျက မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးရှိ ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့တှကေို မွို့သိမျးတိုကျပှဲ တှေ စတငျဖို့ ဖိတျခေါျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
မွငျးခွံမွို့နယျအတှငျးမှာရှိတဲ့ တလုပျကြေးရှာမှာ စဈကောငျစီတပျတှနေဲ့ အပွနျအလှနျ ပဈခတျမူတှရှေိနတေဲ့အတှကျအခုလိုတောငျးဆိုတာဖွဈပွီး မွငျးခွံမွို့မှာလဲ ဒီနေ့ညနပေိုငျးကစပွီး ပေါကျကှဲမှုတှဆေကျတိုကျဖွဈပှားနပေါတယျ။ကရကျဒဈ
လက်နက်ထိပြီး သ‌​​‌‌​ေင်္ဘာပေါ်ကရိက္ခါများ ကားဖြင့် သယ်ယူစဥ် လမ်းမှာ ကေအိုင်အေမှ ပြန်လည်ပစ်ခတ်ပြီး အကုန်သိမ်း